”Kidnapping” – Tsaratanàna: novonoin’ireo mpaka an-keriny ilay kandida depiote | NewsMada
Maty novonoin’ireo naka an-keriny azy Rakotozafy Haingotiana Bonjean, ilay kandidà depiote, anisan’ireo mpilatsaka ho fidiana ao amin’ny distrikan’i Tsaratanàna. Mety efa ho tamin’ny zoma 15 marsa no namonoana azy, saingy omaly vao hita sy nohamarinin’ny fianakaviany ny razana.
Hitan’ny mpanasa lamba tao amin’ny fokontany Andakana, kaominina ambanivohitr’i Betrandraka, distrikan’i Tsaratanàna, omaly ny fatin’ilay depiote nataon’ny dahalo “kidnapping”, antsoina hoe Rakotozafy Haingotiana Bonjean. Araka ny fantatra, saika hirotsara ho kandida avy amin’ny “Isika rehetra miaraka amin’i Rajoelina” (IRM) izy ity. Raha ny fampitam-baovao avy amin’ny zandarimaria, taminy asabotsy lasa teo ireo mpaka an-keriny no nifampiresaka farany tamin’ny fianakavian’ity depiote ity ary nitaky vola tamin’izy ireo. Nisy ampaham-bola efa nomen’ny fianakaviana ireo mpaka an-keriny, saingy tsy nanam-bola izy ireo ka tsy feno ny vola notadiavin-dry zalahy. “Io (ilay depiote io) koa anie efa tsy namanareo intsony fa raha te hahita ny razana ianareo dia alefaso foana ny vola”, hoy ireo dahalo, araka ny tatitra nampitain’ny zandary hatrany. Raha ny fahitana ny razana, araka ny fitsirihana nataon’ny mpitsabo, efa novonoina elaela ity depiote ity raha ny fahasimbana hita tamin’ny vatany. Nilaza ny mpitsabo nanao ny fitsirihana, araka ny tatitra nampitain’ny zandarimaria hatrany fa efa novonoina talohan’io fifampiresahana tamin’ny fianakaviana io ny depiote Bonjean Haingotiana Rakotozafy. Notatahin’ireo mpaka an-keriny mihitsy ny lohany, raha ny tatitra voaray hatrany. Tamin’ny omaly, nisy nahita ny fatiny izay somary mampiahiahy ihany satria efa simba ka nampandre haingana ny fianakaviana ireo olona nahita izany ka voamarina tamin’ny akanjo nanaovany fa tena ilay depiote tokoa ity hita faty ity. Mbola nanamafy hatrany ny rahalahiny fa teny ny depiote Bonjean Haingotiana Rakotozafy ity hita faty ity.
Mihorohoro ireo kandidà depiote any Tsaratanàna…
Tsiahivina fa ny alahady 10 marsa hariva no nalain’ny dahalo an-keriny teo anelanelan’i Bekapaika sy Tsaratanàna ity depiote ity raha hanatitra ny antontan-taratasy firotsahan-kofidina any amin’ny Ovec ao Tsaratanàna. Nosakanan’ireo dahalo maromaro nitondra basy izy tamin’io fotoana io raha nandeha moto. Vola 40 tapitrisa Ar no notakin’ireo mpaka an-keriny tamin’ny fianakaviana taorian’io ho takalonaina. Ny ampitson’io fakana an-keriny io, dahalo iray tratran’ny zandary. Nandritra ny fanadihadiana azy no nanondroany ireo mpiray tsikombakomba aminy. Vokany, voasambotra niaraka tamin’ity dahalo ity ny mpampianatra iray nanome basy nampiasain’ireo jiolahy nandritra ny fakana an-keriny ny depiote Bonjean Haingotiana Rakotozafy. Tratra koa taorian’izay ny kandida iray niaraka tamina olona enina (misy vehivavy amin’izy ireo) hafa voasaringotra tamin’ity raharaha fakana an-keriny ity. Fantatra raha ny loharanom-baovao voaray hatrany fa misy dian-tanan’i Del Kely, dahalo raindahiny amin’ny fakana an-keriny sy halatra omby ao amin’ny distrikan’i Tsaratanàna ambadik’ity raharaha fakana an-keriny ity depiote ity.
Velon-taraina amin’izao fotoana izao ary miantso ny fanjakana ny fikambanan’ireo depiote avy any Tsaratanàna satria manahy izy ireo fa hisy fiantraikany amin’ny fampielezan-kevitra ataon’izy ireo ity raharaha tsy fandriampahalemana miseholany ao Tsaratanàna ity raha tsy voafehy malaky. Efa nidina tany an-toerana rahateo ny praiminisitra lehiben’ny governemanta niaraka tamin’ireo minisitra tompon’andraikitra misahana ny fitandroana ny filaminana taorian’ity raharaha fakana an-keriny ny depiote Bonjean Haingotiana Rakotozafy ity. Andrasana, araka izany, ny tohin’ity fanadihadiana ity raharaha ity.